NEW DELHI, India - Wafdi ka socda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, oo uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed ayaa booqasho ku tagey dalka India.
Mahdi Maxamed Guuleed iyo wafdigiisa ayaa lagu qaabilay Aqalka Madaxtooyadda India halkaasi oo ay kula kulmeen Madaxweynaha dalkaasi Ram Nath Kovind, Ku Xigeenkiisa Venkaiah Naidu iyo Ra’iisul wasaare Narendra Modi
Madaxda ugu saraysa dalka India ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyey wafddiga Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya oo safar ku jooga Dalkaasi India, oo booqasho rasmi ah ku tagey wadankaasi.
Wafdiga dowladda Soomaaliya ayaa ka qeybgallaya shir Caalami ah oo ku saabsan ka faa’idaysaiga kheyraadka dabiiciga ah ee Tamarta oo maanta ka furmaya magaalada New Dalka ee Dalkasi India.
Wafuud ka socota 121 Dal oo Africa, Asia iyo qaaraddo kale ka kala yimid, ayaa shirka lagu casuumay, kaasi oo ay soo qaban-qaabisay dowladda India.
India ayaa xabsiyadeeda kasoo daysay 120 maxbuus oo arrimo la xiriira burcad-badeednimo, kuwaasi lagu soo celiyay dalka kadib markii ay heshiis dhanka is-dhaafsiga maxaabiista la gashay dowladda Federaalka Soomaaliya bishii August, 2017.
Dad badan ugu dhintay India khamri sumeysan oo ay cabeen
Caalamka 23.02.2019. 13:14